Gigi Hadid နဲ့ Zayn Malik တို့ရဲ့ အချစ်က ခိုင်မာနေတယ် ⋆ Popular
Gigi Hadid နဲ့ Zayn Malik တို့ရဲ့ အချစ်က ခိုင်မာနေတယ်
PARIS, FRANCE – OCTOBER 02: Zayn Malik and Gigi Hadid attend the Givenchy show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017 on October 2, 2016 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Gigi Hadid နဲ့ Zayn Malik တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ် တွေက ခိုင်မာနေပါတယ်။ E! News နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Hadid အဖေ Mohamed Hadid က “Gigi ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် လုပ်တဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်လို့ လိုချင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ သူမပျော်နေရင် ကျွန်တော် တို့လည်း ပျော်ပါတယ်” လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Gigi နဲ့ Zayn Malik တို့တွဲနေကြတာ တစ်နှစ်ကျော်နေ ပါပြီ။ သူမရဲ့ မိသားစုကလည်း ခွင့်ပြုထားပုံရပါတယ်။ Mohamed Hadid နဲ့ စေ့စပ်ထားတှဲ့Shiva Safai က “Gigi ၊ Bella နဲ့ Anwar တို့တွေဟာ အရမ်းကို ထူးခြားတဲ့ကလေးတွေပါ။ သူတို့လေးတွေ ကြီးပျင်းလာ တာကို ထိုင်ကြည့်ရတာ အိမ်မက်ဆန်ပါတယ်။ သူတို့ ဘက်က အမြဲ ကာကွယ်ရပ်တည်ပေးနေတဲ့ အမေရှိတာ လည်း အရမ်းကို ကံကောင်းပါတယ်။ သူတို့လေးတွေက လိမ္မာတဲ့ ကလေးတွေပါ။ ကိုယ့်ဘဝကို ရပ်တည်နိုင်ပြီး မိသားစုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်လေးတွေလည်းသူတို့မှာ ရှိပါတယ်။ သူတို့လေးတွေအတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူ ပါတယ်”လို့ E! News ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အလှအပ ထိန်းသိမ်းလျှို့ ဝှက်ချက်ကို ဝေမျှလိုက်သူ HyunA
အာရှ အဆိုတော်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းမယ့်Chris Brown